မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၂) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၂)” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၂) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၂)”
သင်တို.အပေါ်၌ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပေါင်း အလ္လာဟ့်ထံမှ ရရှိပါစေ။
“မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၂)” ကို မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၂) အဖြစ် ဆက်လက်ဖော်ပြပါတော.မည်။
Muslims and the program of Mosque Tour Guide – Part 22
ယခုအပါတ်တွင်မြန်မာပြည်အလည်ပြန်ခရီး- ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက်နေ.မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် – ၉ ရက်အကြာ မြို.ကြီး ၅ မြို.ခရီးစဉ်၌ မန္တလေးမြို.မှ စစ်ကိုင်းမြို.သို.အသွား လမ်းခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်သည့် ဦ့းပိန်တံတားကြီးရှိရာ တောင်သမံအင်း ပတ်လည်လမ်းမကြီးမှ ကားဖြင့်ဝင်ကာ အမရပူရ ရပ်ကွက်များသို.ဖြတ်လျက် လင်းဇင်ကုန်းကဘာန်စတန်ဝင်းသို. သွားရောက်ခဲ.ကြသည်ကို ဖော်ပြပါမည်။
မစဂျဒ်ဟိုစိုင်နီ ဘိုးတော်ဗလီကြီးကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်ဟု ရေးထိုးထားသော်လည်း ဤသည်မှာ ပြန်လည်မွမ်းမံသည့်နှစ်သာဖြစ်နိုင်ပြီး တည်ဆောက်ထားခဲ့ အုတ်ခဲ့ချပ်တို.ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်လက်ထပ်ကတည်းက ရှိနေပြီးသားဟု ခန်.မှန်းရပါသည်။
ဗလီကြီး၏ အရှေ.မြောက်ဘက်ဒေါင့်က အညာဒေသ သဘာဝသောက်သုံးရေတွင်းနောက်ခံရှု.ခင်းဖြင်.မြင်ရသည်.အဆိုပါ ရှေးဗလီမှာ လွမ်းဖွယ်ရာ အငွေ.အသက်များရစ်ပတ်ဝိုင်းနေသလိုများဟု ထင်စရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အနီးအနားဝန်းကျင်မှ မွတ်စလင်မ်အချို.က လာရောက်ပြီး ငါးကြိမ်ဆွလာသ်မှန်မှန်ဝတ်ပြုသူရှိဖို.အားဖြည့်နေရသည်ဟု အနားအိမ်မှတဆင့်သိခဲ့ရပါသည်။ နမားဇ်ဖတ်သူမလာလို. ပိတ်ထားရသည့်အခါလည်းရှိကြောင်းသိခဲ့ပါသဖြင့် အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလိုက်ခဲ့ပါသေးသည်။
မစဂျဒ်ဟိုစိုင်နီ ဘိုးတော်ဗလီကြီး ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တဆက်တည်းလမ်းလျှောက်ဝင်သွားကာ
သခင်ကြီးဦးနု၊ မြို.ဝန်ဘိုင်ဆပ်၊ ဦးပိန်တို.နှင့်တကွ အာရဝါဟ်များအတွက် ကဘာန်မြေပုံတို.မှာ ဇေယာဒသ်ပြုခဲ့ပါသည်။
ရမ္မာဝတီမြို.ဝန် ရွှေတောင်သာဂသူဘွဲ.ရ ကျမ်းပြုစာဆိုတော်ဆရာကြီးဦးနု ဂူဗိမာန်တွင် အမှတ်တရ။
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကတည်းက မြန်မာမွတ်စလင်မ် (အစ္စလာမ့်ရေးရာ) ကျမ်းပြုစာဆိုတော်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ကို သမိုင်းမှတ်တိုင်တည်ခဲ့ပါပြီ။
ဤခရီးစဉ်တွင်အတူလိုက်ပါရင်း အလှည့်ကျ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းယူပေးခဲ့သူ ညီမောင်တစ်ဦးနှင့် တူတော်မောင်တစ်ယောက်လည်းအမှတ်တရပါ။
နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က အစ္စလာမ်သာသနာပိုင်ခံအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသော အာဗစ်ရှားဟိုစိုင်နီ သခင်ကြီး၏ အောက်ပါ သချိင်္ုင်းတော်ဗိမာန်သို. ဝင်ခဲ့ကာ ဆုတောင်းဒိုအာများပြုခဲ့ကြပါသည်။
သူတောင်စဉ်သခင်ကြီး၏ အထုပတ္တိကျောက်စာချပ်လည်း ဖတ်မှတ်လေ.လာနိုင်ပါသည်။
မြန်မာရှင်ဘုရင် ဘိုးတော်ဘုရား၏ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို.အတွက် သခင်ကြီးအား သာသနာပိုင်အဖြစ်ခန်.အပ်သည့် အမိန်.တော်။
အုပ်ချုပ်ရေးဂေါပကလူကြီးရှင်းပြချက်အရ ဤမြေကွက်၏ ယခင်နေရာ-(စကားဝါ)ပန်းခြံတွင် သခင်ကြီးက မွေ.ပျော်ကိန်းစက်ချင်သည်မိန်.ခဲံ့ဘူးပါသဖြင့် အဆိုပါဆန္ဒအကောင်အထည်ပေါ်စေရန် ၎င်းမြေကွက်ဝယ်ယူလှူဒါန်းပေးခဲ့သူ ပုဏ္ဍားဝန်မင်း၏ ဂူဗိမာန်ငယ်ကိုလည်း သခင်ကြီး၏ အုတ်ဂူတော်ဘေးတွင် အတူတူတည်ရှိနေလျက်ပါ။
သူတော်စဉ်ဗိမာန်တော်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့် ကုသိုလ်အလုပ်ပြုပေးနေသူ လူကြီးအချို.နှင့် စုံခဲ့စဉ် အာဗစ်ရှားဟိုစိုင်နီသခင်၏ ဂူရှေ.အမှတ်တရ။
အဆိုပါ သူတော်စသ်တို. ကိန်းဝတ်ခိုနားရာ ဂူဗိမာန်တော်တွေ တစုတစည်းတည်းရှိပြီး ရှေးဟောင်းဗလီကြီးလည်းရှိသော ဤ လင်းဇင်ကုန်းကဘာရ်စတာန်ကြီးအား အဓိက စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးကာ အမြဲမပြတ်ဆိုသလို သူငါအများသွားရောက် ဇေယာရသ်ပြု ဖွာတရာဖတ် ဒိုအာဆုတောင်းပွဲများ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ဃရာနာ အစ္စလာမ်သာသနာ ပရမတ္တမိသားစုဝင် လူကြီးများ၏ ဓါတ်ပုံတချို.ကိုပါ တပါတည်း မှတ်တင်ယူခဲ.ပါကြောင်းတင်ပြရင်း
ဤသမိုင်းဝင်ရှေးဗလီကြီးနှင့် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်က မြန်မာမွတ်စလင်မ် သူတော်စဉ်ကြီးတို. အနားယူကိန်းအောင်းခဲ့ရာ ဗိမာန်နေရာကို အလည်ပတ်ပြုလေ.လာခဲ့ခြင်းအား
“မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၂)” ခေါင်းစဉ်အနေဖြင့် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တလွှား မွတ်စလင်မ်မိတ်ဆွေများနှင့် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များလည်း အခုလို ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း၊ ဗလီများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ရာ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦး၊ နေရာဌာနများသို. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ.လာခြင်း အခန်းကဏ္ဍများမှာ ပါဝင်လေ.လာစေလို့ပါ၍ မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ဤအမှတ်တရ အစီအစဉ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင်အစအဆုံးသွားရောက်ပါဝင်လျက် သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းတင်ခွင်.ရခဲ့ပါ၍ အလ္လာဟ်အရှင်အား များစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါ၏။
ဆက်လက်ပြီး ဤလုပ်ငန်းအကြောင်းဗဟုသုတများ မျှဝေပေးနိုင်ခွင့်ရပါစေ။ ဖတ်ကြည့်သူ၊ တင်ပြသူ၊ လာရောက်လေ.လာသူများအား အလ္လာဟ်အရှင် နှစ်သက်လက်ခံသဘောတော်မူကာ အခက်အခဲများမှ ဝေးလျက် အကူအညီများရပါစေ။
အပိုင်း (၂၁) သိနိုင်ရန် အောက်ပါ ပူးတွဲ အွန်လိုင်းလိပ်စာကို ကလစ်နှိပ်ပြီး သွားကြည့်၊ အသေးစိတ်သိနိုင်ပါသည်။
This entry was posted on February 18, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဗလီကို ချစ်သူများ၏ နေ.တနေ. / မွတ်စလင်မ်တို.နှင့် ဗလီဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း ( အပိုင်း၂၃) “မြန်မာပြည်မှ ဗလီများသို. အလည်ခရီး အပိုင်း (၃)”	၈ လအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်ပို့ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင် ၁ သောင်းကျော်ရှိဟုဆို →